Xuquuqda daabacaadda iyo Kacaankii Faransiiska | Martech Zone
Xuquuqda daabacaadda iyo Kacaankii Faransiiska
Axad, Nofeembar, 19, 2006 Isniin, Janaayo 25, 2010 Douglas Karr
Sawir laga soo qaaday ©Xarunta Guillotine
Seed faallooyinka ku saabsan xuquuqda daabacaadda iyo nuqullada qoraalka ee dagaalka cusub ee u dhexeeya MPAA iyo shirkad culeys ku saarta filimada IPods. Kani waa Kacaankii Faransiiska mar labaad… waxaa lagu baahiyay internetka. RIAA (King Louis) iyo MPAA (Marie Antoinette) dhibaato ayaa ku jirta. Ganacsigooda (The Bastille) ayaa lagu weerarayaa (internetka) waxayna aakhirka lumi doonaan madaxooda. Intii ay albaabada u furi lahaayeen dimuqraadiyadda, waxay doorbidi lahaayeen “aynu cunno keeg” oo aan sii wadno taageeridda hodantinimada hantida iyo xakamaynta warshadaha madadaalada.
Kacaankii Faransiiska (1789â ?? 1799) wuxuu ahaa xilli muhiim u ah taariikhda xadaaradda Faransiiska, Yurub iyo Reer Galbeedka. Intii lagu gudajiray waqtigan, jamhuuriyada waxay bedeshay boqortooyadii buuxda ee Faransiiska, Kaniisada Katooliga ee Roman Katooligana waxaa lagu qasbay in lagu sameeyo dib u qaabeyn xagjir ah. In kasta oo Faransiisku ku dhex wareegi lahaa jamhuuriyadda, boqortooyada, iyo boqortooyada muddo 75 sano ah ka dib markii Jamhuuriyadda Koowaad ay ku dhacday inqilaab, Kacaanku waxaa si weyn loogu arkaa inuu yahay isbeddel weyn oo ku yimid taariikhda dimuqraadiyadda reer galbeedkaâ from laga soo bilaabo da'da madax-bannaanida iyo arsaaqnimada, illaa da'da muwaadinka sida xoogga siyaasadeed ee ugu sarreeya - Wikipedia
Sayidyada (Maamulayaasha Warshadaha Madadaalada) ayaa waayi doona madaxooda, iyadoon loo eegin inta qareen (vassals) ee ay dadka ugu yeeraan. Mindida ayaa ku dhici doonta aristocracy, waa lama huraan. Waxaan u maleynayaa difaaca kaliya ee ay ka hartay inuu yahay inay isku dayaan inay dacweeyaan dinaar kasta oo ugu dambeeya nin walba oo reer miyi ah si ay isugu dayaan inay ilaaliyaan bulshada feudal xeelad ilaalin doonta qaab nololeedkooda boqornimo.
Louis iyo Marie waxay la kulmeen masiirkooda maxaa yeelay ma jirin waddo ay dadku ugu istaagaan iyaga. Waxaan ka baqayaa in RIAA iyo MPAA ay isku xaalad yihiin. Taageerada dadka la'aanteed, mar dambe fadhiisan mayno oo waxaan cuneynaa keeg. Boqortooyadu way dhici doontaa.
Ka dib fikir: Kama soo horjeedo fannaaniin sameeya lacag aad u fiican… Waan ku qanacsanahay kartidooda waana ogahay inay si adag u shaqeeyaan. Waa la ogyahay in fannaaniintu inta ugu badan ee dakhligoodu ka soo baxo waddada oo aaney u qaybin shaqadooda. Taasi waa halka ay warshaduhu iska beddelayaan… fanaaniintuna waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan. Kuwo badan ayaa muusikadooda ugu qaybinaya khadka tooska ah bilaash ama xitaa waxay u dhaqmayaan sidii shirkado duubistooda ah. Tani waa mustaqbalka warshadaha.
Hal muuqaal oo biraawsar ah oo suuqa qaadan lahaa!
Isticmaal Google Docs oo leh WordPress?